Iindaba -Hamba ungene kumngxunya wokugaya we-APP kwaye ubone ukuba umthi uba yimpuphu njani?
Ukususela kutshintsho lomlingo ukusuka emthini ukuya ephepheni, yeyiphi inkqubo eyenziweyo kwaye loluphi uhlobo lwebali ebenalo? Lo ayingomsebenzi olula. Akukho kuphela iinkqubo zenkqubo, kodwa ikwimigangatho ephezulu kunye neemfuno ezingqongqo. Ngeli xesha, masihambe siye kwi-APP's pulp mill ukuze sihlolisise iphepha ukusuka kwi-0 ukuya kwi-1.
Emva kokungena kumzi-mveliso, izinto ezisetyenzisiweyo zomthi ziyasikwa kubude obuhlangabezana neemfuno zesixhobo, emva koko idyasi (ixolo) engahambelaniyo nomgangatho we-pulp iyaxobulwa. Iyunifomu kunye neetshipsi ezikumgangatho ophezulu zithunyelwa kwicandelo lokupheka leenkuni ngenkqubo yokuhambisa evaliweyo. Iitshipsi eziseleyo zeenkuni zityunyuziwe zitshiswe kwibhoyila ukwenza umbane. Amanzi okanye ezinye izinto eziveliswe ngexesha lokuqhubekeka ziya kuphinda zenziwe umbane okanye umphunga.
Inkqubo yokutshiza ibandakanya ukupheka, ukususa ukungcola, ukususwa kwe-lignin, i-bleaching, ukuhluza amanzi kunye nokwenza njalo njalo. Uvavanyo lwetekhnoloji luphezulu kakhulu, kwaye zonke iinkcukacha ziya kuchaphazela umgangatho wephepha
Intlama yomthi ephekiweyo ithunyelwa kwicandelo lokwehliswa kweoksijini emva kokuba ukungcola kususwe kwicandelo lokuhlola, apho ilignin ekwipulp yomthi isuswa kwakhona, ukuze umgubo ube nekhono le-bleach elingcono. Yeklorine engenazinto, kwaye emva koko udibanise nokusebenza okuphezulu kokucofa izixhobo zokuhlamba ukuqinisekisa ukuba imveliso yempuphu ineempawu zomgangatho ozinzileyo, ubumhlophe obuphezulu, ucoceko oluphezulu, kunye neempawu ezibonakalayo zomzimba.
Ngexesha lenkqubo yokupheka kweenkuni, isixa esikhulu samanzi amdaka ngombala (esaziwa ngokuba “sisiselo esinxilisayo”) esine-alkaline lignin. Ubunzima bokunyanga utywala obumnyama buyeyona nto iphambili kungcoliseko kumashishini ephepha kunye nasephepheni.
Inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yealkali isetyenziselwa ukugxila kwizinto ezinobunzima ngomphunga kwaye emva koko itshise kwibhoyila. Umphunga oxinzelelekileyo ovelisiweyo usetyenziselwa ukuveliswa kwamandla, onokuthi uhlangane malunga neepesenti ezingama-90 zamandla ombane wemveliso yempuphu, kwaye umphunga ophakathi kunye noxinzelelo oluphantsi unokusetyenziswa kwakhona kwimveliso.
Ngexesha elifanayo, i-alkali efunekayo kwinkqubo yokutshiza inokuphinda iphinde isetyenziswe kwinkqubo yokubuyisela i-alkali. Oku akupheleli nje ekunciphiseni iindleko zemveliso, kodwa kukwafezekisa ukhuselo lokusingqongileyo, ulondolozo lwamandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa.
Ibhodi ye-pulp eyenziweyo inqunyulwa ngumsiki wephepha kwiimpawu zobunzima obuthile kunye nobukhulu, emva koko zithunyelwa kulayini ngamnye wokupakisha.
Ukulungiselela ukuthuthwa, kukho iibhodi ze-pulp ezigqityiweyo kwibhanti yokuhambisa, kwaye zonke ziyahlolwa emva kobumhlophe kunye nenqanaba lokungcola.
Izixhobo zisebenza ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo, kunye nemveliso yansuku zonke yeetoni ezingama-3,000. Ngaphandle kokugcinwa komatshini, amanye amaxesha asebenza ngaphandle kokuphazanyiswa.
Emva kokupakisha okulandelayo okucwangcisiweyo kwibhodi ye-pulp, iya kusongelwa ngophepha lwephepha ukuququzelela ukupakishwa kunye nokuthuthwa kwemisebenzi elandelayo, kunye nokuthintela ukungcoliseka kwebhodi ye-pulp ngexesha lokuhamba.
Ukusukela ngoko, umatshini we-inkjet ufafaza inombolo ye-serial, umhla wokuvelisa, kunye nekhowudi ye-QR yebhodi ye-pulp. Unokulandela umkhondo wemvelaphi yempuphu ngokusekwe kulwazi lwefayile yekhowudi ukuqinisekisa ukuba "ikhonkco" alophukanga.
Ke isitaki sigcina iibhegi ezincinci ezisibhozo kwingxowa enye enkulu, kwaye ekugqibeleni siyilungise ngomatshini wokubopha, olungele imisebenzi ye-forklift kunye nokusebenza kwe-dock ukuphakamisa emva kokungaxhunyiwe kwi-intanethi kunye nokugcinwa kwempahla.
Oku kukuphela kwekhonkco "pulp". Emva kokutyala ihlathi kunye nokwenza umgubo, liya kwenziwa njani iphepha ngokulandelayo? Nceda linda iingxelo zokulandelela.